Article | PTH
March 27, 2018	Article 0
လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ အားလပ်ချိန် ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အားလပ်ချိန်လေးတွေကို ကောင်းမွန်အောင် အသုံးချခြင်းဖြင့် ဘဝမှာ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ ၁။ ဝါသနာ ပါတာ လုပ်ပါ မိမိရဲ့ အားလပ်တဲ့ နေ့ အားလပ်တဲ့ အချိန်မှာ စာဖတ်တာ၊ ရေကူးတာ၊ ပန်းချီဆွဲတာ စသဖြင့် မိမိ ဝါသနာ ပါတဲ့ အရာလေးတွေကို ရွေးချယ် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိရဲ့ စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။ ၂။ မတွေ့ဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆွေမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ပါ လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း နေလို့ မရပါဘူး။ မတွေ့ဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ အတွက်လည်း အချိန် …
တကယ်လို့ သင်ဟာ မိဘ တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ရင်
March 21, 2018	Article 0
! တကယ်လို့ သင်ဟာ မိဘ တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ သားသမီးကို လူတော် တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်ပါ ဒါပေမယ့် လူတော် လူဆိုးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ – ! တကယ်လို့ သင်ဟာ မိဘ တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ သားသမီးအတွေ အပေါ်မှာ ချစ်ပါ ဒါပေမယ့် အလိုမလိုက်မိပါစေနဲ့။ – ! တကယ်လို့ သင်ဟာ မိဘတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ သားသမီးတွေကို ပညာတတ်အောင် သင်ပေးပါ ဒါပေမယ့် အတတ်ပညာနဲ့ အသိပညာကို ခွဲခြားတတ်ပါစေ။ – ! တကယ်လို့ သင်ဟာ မိဘတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ …